Midina ny vidin-tsolika: midangana ny vidim-piainana | NewsMada
Midina ny vidin-tsolika: midangana ny vidim-piainana
Na midina aza ny vidin-tsolika, azo antoka fa tsy hihena mihitsy ny saran-dalana, indrindra amin’izao fialan-tsasatra izao, fotoana mahamaro ny mpandeha any amin’ny faritra sy miakatra aty an-dRenivohitra. Tsy hidina, toraka izany, koa ny vidin-javatra amin’ny ankapobeny.
Araka ny loharanom-baovao, nidina nanomboka tamin’ny 12 alina teo ny vidin-tsolika raha tsy nisy ny fiovana. Manodidina hatrany amin’ny 70 hatramin’ny 100 Ar ny fihenam-bidy, raha -70 Ar ny fidinana, ny fiandohan’ny volana jolay teo. Izany hoe, lasa 3.700 Ar/l ny vidin’ny lasantsy SP 95 raha 3.800 Ar teo aloha, lasa 3.120 Ar/l ny gazoala raha 3.230 Ar/l teo aloha.
Fanindroany nisesy ity fihenam-bidin’ny vidin-tsolika ity. Manaraka ny onjan’ny vidiny eo amin’ny tsena iraisam-pirenena. Saika nidina, toy izany, avokoa ny vidiny maneran-tany. Raha ny eto Madagasikara, ny vidiny eo amin’ny tsena tamin’ny roa volana lasa, hanaovana ny famandrihana no ampiharina ankehitriny amin’ny mpanjifa. Tsikaritra kosa anefa fa tsy midina ny saran-dalana, singa voalohany miankina amin’ny vidin-tsolika.
Tsy miantraika any amin’ny isan-tokantrano
Manampy izany, saika efa midangana avokoa ny vidin-javatra amin’ny ankapobeny tamin’ity taona ity. Tsy mihetsika manodidina ny 1.700 Ar hatramin’ny 2.000 Ar ny vidim-bary aty an-tanàn-dehibe. Manodidina ny 12.500 Ar hatramin’ny 20.000 Ar ny kilaon’ny kafe, 3.200 Ar-3.600 Ar ny kilaon’ny siramamy, 5.500 Ar-7.000Ar ny litatry ny menaka. Manampy ireo, nisondrotra avokoa ny hetra alain’ny fanjakana amin’ny orinasa. Ary ny tena loza, nisondrotra 7,5% ny faktioran’ny Jirama. Fehiny, zary tenenina fotsiny ny fihenan’ny vidin-tsolika, fa tsy miantraika any anaty vilanin’ny isan-tokantranon’ny Malagasy.